समाचार Archives - Page5of 100 - hamrosandesh.com – Hamrosandesh.com
२०७६ माघ २७ गते ०:२४
काठमाडौँ ,२७ माघ । नेपाल टेलिकमले विन्टर अफर सार्वजनिक गरेको छ । अफर अन्तर्गतको अल टाइम डाटा प्याकमा १५ रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्मका प्याक उपलब्ध छन् । ६० एमबी देखि १४ हजार एमबी सम्मका प्याकेज १ दिनदेखि २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको...
२०७६ माघ २६ गते १९:३९
काठमाडौँ ,२६ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सहभागि हुँदै गर्दा असहज भएको भन्दै बिचमै उठेर बालुवाटार हिडेका छन् । ओलीले शनिबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डायलाइसिस गरेका थिए। मिर्गौलाले प्राकृतिकरुपमा काम गर्न छाडेपछि उनी अहिले सातामा...
२०७६ माघ २६ गते १९:२८
काठमाडौँ ,२६ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट सार्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका छन् । शनिवार नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘केन्द्रीय राजधानीको कुरा यसअघि डा हर्कबहादुर गुरुङको प्रतिवेदनमा...
प्रहरीलाई सफलता यस्तो गम्भीर अपराधमा रंगेहात २ महिला पक्राउ
२०७६ माघ २६ गते १९:०४
काठमाडौँ ,२६ माघ । गम्भीर अ’परा’धमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले २ महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा आईतवार प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गाँ’जासहित दुई जना महिलालाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो । जानकारी अनुसार पर्साको मधुवनी गाउँपालिका ४ कि ४५ वर्षीया सलटनी माझी मुसहर र...
परस्त्रीसँग प्रेम सम्बन्ध : फोन नउठाएको भन्दै हत्या
२०७६ माघ २६ गते १८:१६
काठमाडौँ ,२६ माघ । फोन गर्दा नउठाएको विवादले एक व्यक्तिले विवाहित प्रेमिकाको हत्या गरेका छन् । प्रेमिकाको पासविक रुपमा हत्या गरेका प्रेमीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले प्रेमिकाको हत्या गरेको आरोपमा २५ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद साहलाई पक्राउ गरेको छ । साहमाथि सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–६...
गुडिरहेको बसले बिजुलीको तार छुँदा ६ जनाको मृत्यु
२०७६ माघ २६ गते १८:०७
काठमाडौँ ,२६ माघ । भारतको ओडिसाको गंजाम जिल्लास्थित गोलन्तारामा एउटा गुडिरहेको बसले बिजुलीको तारले छुँदा बसमा आगलागी भएको छ । बसले बिजुलीको तार छुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको भारतीय अनलाइन सस्करण आजतकले जनाएको छ । घटनामा ४० जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएको प्रहरीले...
ओलीलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनआवाज सही छ : भट्टराई
२०७६ माघ २५ गते २०:५७
काठमाडौँ ,२५ माघ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाईसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनआवाज सही भएको बताएका छन्। शुक्रबार राति ट्विट गर्दै डा. भट्टराईले आफूले सुरुदेखि नै जनआवाजलाई कदर गर्दै आएको बताउँदै त्यसनिम्ति अहिलेको जस्तो कमजोर अख्तियारको...
२०७६ माघ २५ गते २०:४३
काठमाडौँ ,२५ माघ । ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ लाई पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठकले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनसहित बहुमतले...
२०७६ माघ २५ गते १९:५१
काठमाडौँ ,२५ माघ । बाँकेको नेपालगञ्जमा म्याद नाघेका ग्यास सिलिन्डर छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेका छन् । ग्यास बिक्रेताले पुराना ग्यास सिलिन्डरमा रङरोगन गरी नयाँ देखाउँदै ग्यास भरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले ग्यास उपभोक्ता आमनागरिक उच्च जोखिममा देखिएका छन् । यस्ता कामको नियमन गर्ने...
बन्दीपुरमा ट्रक र बस ठोक्किदा दुर्घटना, १९ जना घाइते
२०७६ माघ २५ गते १५:१४
काठमाडौँ ,२५ माघ । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ रिमाल्नीमा आज बिहान भएको सवारी दु’र्घटनामा १९ यात्रु घाइते भएका छन् । दमौलीबाट डुम्रेतर्फ जाँदै गरेको ना ७ ख ६२६८ नं को ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना ७ ख ४४२४ नं को बस एकआपसमा...
« अघिल्ला 1 …34567… 100 पछिल्ला »
काठमाडौ, २५ माघ । मलेशियामा सेकुरिटी गार्ड गर्दै आएका झापाको कनकाई नगरपालिका वडा न....
टर्की समर्थित वि द्रोहीले सिरियाली हेलिकप्टर यसरी खसाल्यो हेर्नुहाेस
काठमाडौँ ,१ फागुन । क्षेत्रमा बढेको तनावका बीच टर्की समर्थित वि द्रोही समूहले पश्चिम...
बुर्किना फासोमा १८ जना सर्वसाधारणको हत्या
ग्यास सिलिन्डर विस्फोट, १२ जनाको ज्यान गयो